Madaxweyne Xasan Sheekh oo si weyn loogu soo dhaweeyay Baydhabo (Daawo Sawirada) | Allbanaadir.com
Home NEWS Madaxweyne Xasan Sheekh oo si weyn loogu soo dhaweeyay Baydhabo (Daawo Sawirada)
Madaxweynaha cusub ee dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wefdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa goordhaw gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo waxaa si weyn Madaxweyne Xasan Sheekh iyo wefdiga la socda ugu soo dhaweeyay Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Xildhibaano katirsan labada Aqal, Wasiiro iyo masuuliyiin kale.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa soo dhaweynta kadib loo galbiyay xarunta Madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed halkaas oo la filayo in uu ku nasto kadibna kulama kula qaato Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed.
Safarka Madaxweyne Xasan Sheekh goordhaw ku tagay magaalada Baydhabo ayaa noqonaya kii ugu horeeyay uu kaga baxo caasimadda Muqdisho tan iyo markii dib loo doortay 15-kii bishan May.
Previous articleXukun adag oo lagu riday askar u dhalatay dalka Ruushka oo lagu qabtay Ukraine
Next articleRW Rooble oo xariga ka jaray Dugsiga agoonta Ciidanka Booliska Soomaaliyeed (Sawirro)